Iza orinasa PVC fanatanjahan-tena rihana no tsara? - China Shijiazhuang Yichen Plastic Floor
Iza orinasa PVC fanatanjahan-tena rihana no tsara?
PVC fanatanjahan-tena tany dia karazana rihana lasa fanatanjahan-tena indrindra fa tany amin'ny alalan'ny fampiasana PVC Materials. Indrindra, dia vokarin'ny hofafako hiala coating teknika na calendering coating, extruding na gazety teknika, amin'ny mitohy taratasy substrate, amin'ny fampiasana PVC sy ny mpiara-polymer resins ho toy ny tena akora avy eo hametraka filler, plasticizer, stabilizer, colorant sy ny vondrona fanampiny fitaovana.
Ary izay orinasa PVC Flooring fanatanjahan-tena no tsara? Ny fanatanjahan-tena Flooring ny Shijiazhuang Yichen Sports Plastic Floor Co., Ltd misy mifaritra loko, fomba mazava sy mihasimba, mangarahara sosona sy ny endri-javatra tsara ny antislip, taitra hisakana ny fiasan'ireny, sns ny Flooring efa lasa ny taratasy fanamarinana ny fiarovana ny tontolo iainana, dia maitso sy ny tontolo iainana -friendly vokatra. Tsy azo ampiasaina ho an'ny toerana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana takin'ny, toy ny faritra avo fifamoivoizana toy ny hopitaly, akanin-jaza, sns koa, ny PVC Flooring ny fametrahana ny tena mora sy mora. Afa-tsy amin'ny tena-leveling simenitra, dia azo nametraka, ary tsy ho lehibe ny fandotoana feo mandritra ny fametrahana.
Shijiazhuang Yichen Sports Plastic Floor Co., Ltd., toy ny mpanamboatra ny PVC matihanina Flooring fanatanjahan-tena, manana fanaraha-maso henjana sy ny kalitao ambony rehefa avy-varotra fanompoana, mpanjifa rehetra hahazoana antoka fa mahay mandray vokatra.
Product Quality fanomezan-toky: ny vokatra tsy manana loko hafa (izany batch), volon'ondry sisiny, lota raviny tsisin'ny, bulge, uneven hatevin'ny, fofona sy ny olana hafa tsy lavorary. Yichen vokatra rehetra dia misy soratra hoe amin'ny mahay taratasy fanamarinana talohan'ny nandaozany orinasa. Koa ny fiantohana ny entana mihitsy dia 6 taona (farany ambony), ny 2 taona ho an'ny iombonana kalitao. (Afa-tsy ny vokatra namboarina manokana sy ny toetra fampihenana nateraky ny fampiasana, fametrahana, mahantra fikarakarana.)
Main vokatry ny Shijiazhuang Yichen Sports Plastic Floor Co., Ltd: plastika rihana, PVC Flooring, fanatanjahan-tena Flooring, UV andian-dahatsoratra Flooring, homogeneous Flooring sns. Ny vokatra dia tsy raisina tsara ihany amin'ny tsena an-trano, fa koa amin'ny oversea tsena. Yichen rihana manana laza tsara indrindra sy ny finoana sy ny fiaraha-miasa tsara amin 'ny an-tokantrano sy ny any ampitan-dranomasina mpanjifa ny vokatra tsara, asa fanompoana sy Ankehitriny-varotra fanompoana, sns